Denim Laba Pocket Classic Button Down
Ka soo bax hurdadaada oo ku taal ubax ubax leh oo leh midab quruxsan iyo midab xayawaan ah oo faahfaahinaya. 100% Rayon.
Isbuuc dhammaadka usbuuc si loo shaqeeyo lagama maarmaan, Labada Pocket Classic Button Down waa badhan miisaankiisu hooseeyo oo leh laba jeeb oo xabadka ah iyo taam aan dadaal lahayn. Xidho qoraxda cadcad ee loo yaqaan 'denim' oo ku dhegan, ku xidhan ama sida ay tahay gunta hoose. 100% TENCEL Lyocell.
Dhar khafiif ah 100% naylon, khafiif hoose oo buuxin ah, dharka ugu ammaansan uguna raaxada badan ilmahaaga, keen diirimaad aan xakamayn.
Jaakada goose ee ragga oo leh dhar 100% polyester, 90/10 buuxinta goose, dharka ugu amniga badan uguna raaxada badan, waxay siisaa diirimaad aan xakameyn.
Jaakada dhabta ah ee gabadha oo leh dhar fudud 100% nylon, 90/10 hoos buuxin ah, dharka kuugu raaxada badan adiga, sii diirimaad aan xakameyn. Kulayl ku hay oo celiya biyo sarreeya. Waa la iska ilaalin karaa si loo qoyo maalinta roobka ama barafka.
Jaakad dhaadheer oo laba jeebood oo khaas ah leh, ma aha oo kaliya inay kuguleyliso, laakiin sidoo kale waxay u muuqataa mid fiican. 100% polyamide
Jaakada dhabta ah ee haweenka ee dharka fudud leh 100% nylon, 90/10 hoos buuxin, dharka ugu raaxada badan adiga, ku siiso diirimaad aan xakameyn. Kulayl ku hay oo celiya biyo sarreeya. Waa la iska ilaalin karaa si loo qoyo maalinta roobka ama barafka.
Gabal dhar ah ayaa loo qaybin karaa laba qaybood, qaybta dibedda ayaa laga ilaaliyaa dabaysha iyo roobka ， qaybta gudaha waxaa ka buuxa 90 dhab ah, mood iyo deeqsi leh generous dharka oo dhami waa mid aad u diirran oo raaxo leh.
Dharka Long Sleeve A-Line waa mid raaxo leh dhar jilicsan oo taabasho ah. Naqshadeeyay labadeena jeeb ee caadiga ah oo leh maro midab leh iyo dareen hawo leh 100% TENCEL Lyocell.